သင္ အသက္( 20 – 28 ) ဆိုုလ်ွင္ ဒါကိုုမျဖစ္မေနဖတ္ပါ – Tameelay
သင္ အသက္( 20 – 28 ) ဆိုုလ်ွင္ ဒါကိုုမျဖစ္မေနဖတ္ပါ
အသက္ (၂၀)ေက်ာ္အရြယ္ဟာ ဘ၀မွာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာသလို မိဘေတြကလည္း အရြယ္ေရာက္လာသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆက္ဆံလာခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအရြယ္မွာ ေငြရွာဖို႔အတြက္ကိုလည္း အရမ္းကိုစိတ္အားထက္သန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအရြယ္မွာ သင့္အေနနဲ႔ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရၿပီးသည္ျဖစ္ေစ မရေသးဘူးျဖစ္ေစ၊ (၂၀)ေက်ာ္အရြယ္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္တတ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးႀကီးမားမားေအာင္ျမင္မႈကို ရယူဖို႔က အရမ္းငယ္ေသးတယ္လို႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အသက္(၂၀)ေက်ာ္အရြယ္ဆိုတာ သင့္ရဲ႕ဘ၀ တေလွ်ာက္လံုးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြဆြတ္ခူးရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကို စတင္ပ်ိဳးေထာင္ ေမြးျမဴသင့္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ (၂၀)ေက်ာ္ေတြအတြက္ ဒီေန႔လုပ္ မနက္ျဖန္မွာ ထူးျခားခ်က္ေတြ ခံစားရမယ့္ လုပ္ေဆာင္စရာ(၇)ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အျမန္လႈပ္ရွားရင္ မေတာ္တဆမႈေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေတာ္တဆမႈကိုေၾကာက္ေနရင္ ျမန္ျမန္လႈပ္ရွားႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူအမ်ားစုက အလုပ္ေျပာင္းတာလိုမ်ိဳး ထူးျခားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရမွာကို မွားသြားမလား စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔တတ္ၾကပါတယ္။
သင့္အတြက္ တစ္ခုခုအဆင္မေျပဘူးခံစားရရင္ ႐ုန္းထြက္ဖို႔အတြက္ ေၾကာက္ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ နယ္ပယ္သစ္မွာ သင္အခက္ေတြ႔ခ်င္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို႐ုန္းထြက္လုိက္မွသာ သင္နဲ႔ကိုက္ညီမႈကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုမွတ္ထားရမွာက သင္ဘယ္ႀကိမ္႐ႈံးနိမ့္လဲဆိုတာထက္ သင္ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္လဲဆိုတာကိုပဲ လူေတြက အေရးစိုက္ၾကတာပါ။
ဒီတစ္ခုကို သင္စိတ္၀င္စားမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဘယ္လို စီမံရမယ္ဆိုတာက အရမ္းကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ကဲ တြက္ႀကည့္ရေအာင္။ အသက္(၂၅)ႏွစ္မွာ စတင္ၿပီး တစ္လမွာ ေဒၚလာ(၂၀၀) စုေဆာင္းတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္တယ္ ဆုိၾကပါစို႔။
သင့္အေနနဲ႔ စုေဆာင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြရဲ႕ တစ္ႏွစ္ကိုု (၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါမွ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၃၀၅၂၀၄) အထိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ (၂၀)ေက်ာ္အရြယ္နဲ႔ (၃၀)အေစာပိုင္းကို လစ္လ်ဴ႐ူၿပီး (၃၅)ႏွစ္မွ စတင္စုေဆာင္းရင္းႏွီးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသက္(၆၅)ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ (၁၆၆၄၅၁) ေလာက္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Credit – အနာဂတ္အလင္းတန္းမ်ား
သင် အသက်( 20 – 28 ) ဆိုုလျှင် ဒါကိုုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ
အလွတ်ရသလောက်နီးပါးဖြစ်အောင် ဖတ်ထားလိုုက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်..
အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ်ဟာ ဘဝမှာ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာသလို မိဘတွေကလည်း အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံလာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရွယ်မှာ ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုလည်း အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသည်ဖြစ်စေ မရသေးဘူးဖြစ်စေ၊ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီအချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကို ရယူဖို့က အရမ်းငယ်သေးတယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့ဘဝ တလျှောက်လုံးမှာ အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးရယူနိုင်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို စတင်ပျိုးထောင် မွေးမြူသင့်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၂၀)ကျော်တွေအတွက် ဒီနေ့လုပ် မနက်ဖြန်မှာ ထူးခြားချက်တွေ ခံစားရမယ့် လုပ်ဆောင်စရာ(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်ပြီလို့ မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အလုပ်ထွက်ပြီး MBA ဘွဲ့သွားယူဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်တတ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို သင်ယူတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့အရေးကိစ္စအတွက် အချိန်တွေအလဟဿကုန်ဆုံးနေမယ့်အစား အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ လေ့လာသင်ယူပါ။ အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အွန်လိုင်ကနေ အခမဲ့သင်ကြားပေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ ကြိုးစားရှာဖွေ လေ့လာပါ။
၂။ အမှားလုပ်မိဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
အမြန်လှုပ်ရှားရင် မတော်တဆမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆမှုကိုကြောက်နေရင် မြန်မြန်လှုပ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုက အလုပ်ပြောင်းတာလိုမျိုး ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမှာကို မှားသွားမလား စိုးရိမ်ကြောက်လန့်တတ်ကြပါတယ်။
သင့်အတွက် တစ်ခုခုအဆင်မပြေဘူးခံစားရရင် ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် ကြောက်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နယ်ပယ်သစ်မှာ သင်အခက်တွေ့ချင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရုန်းထွက်လိုက်မှသာ သင်နဲ့ကိုက်ညီမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက သင်ဘယ်ကြိမ်ရှုံးနိမ့်လဲဆိုတာထက် သင်ဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာကိုပဲ လူတွေက အရေးစိုက်ကြတာပါ။
၃။ အသုံးစရိတ်၊ စုဆောင်းမှု နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
ဒီတစ်ခုကို သင်စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို စီမံရမယ်ဆိုတာက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ တွက်ကြည့်ရအောင်။ အသက်(၂၅)နှစ်မှာ စတင်ပြီး တစ်လမှာ ဒေါ်လာ(၂၀၀) စုဆောင်းတယ် ဒါမှမဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်တယ် ဆိုကြပါစို့။
သင့်အနေနဲ့ စုဆောင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေရဲ့ တစ်နှစ်ကိုု (၅)ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အသက်(၆၅)နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၃၀၅၂၀၄) အထိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ (၃၀)အစောပိုင်းကို လစ်လျူရူပြီး (၃၅)နှစ်မှ စတင်စုဆောင်းရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်(၆၅)နှစ်မှာ ဒေါ်လာ (၁၆၆၄၅၁) လောက်ပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ချရေးပါ။ မှတ်စုု စာအုုပ်မှာ စာရေးပါ။ စာအုပ်တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးစိတ်ကူးတွေ၊ စီမံချက်တွေ၊ လုပ်ချင်တာတွေ အားလုံးကို ချရေးထားပါ။ ဒီလို ချရေးထားတာဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေ အတွေးတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သင့်ဦးနှောက်ကိုလည်း ဆန်းသစ်တီထွင်ဉာဏ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး မိုက်တာမျိုးလုပ်ချင်လား? သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်း တစ်ခုရေးပါ။
၅။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ တရားမှတ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် တစ်နေ့လုံးနေလို့ကောင်းနေမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပိုရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဦးနှောက် ကျန်းမာဖို့အတွက်ကတော့ တရားထိုင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်တာက သင့်ရဲ့စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပြီး မှန်ကန်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ယောဂ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မိမိကိုယ်ကို အခြားလူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ လုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုဝင်ငွေကောင်းနေတယ်ဆိုတာတွေ လိုက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ပိုင် ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကိုရောက်ဖို့ သင်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကို သင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့ လှုပ်ရှားပါ။
အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာပြန်မရနိုင်တာကြောင့် အပေးအကမ်းမရှိတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ပြန်ရဖို့ကို မျှော်လင့်မနေသင့်ပါဘူး။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းကျိုးအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ကို တစ်စက္ကန့်မှ နှောင့်နှေ့မနေပါစေနဲ့။ ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငွေကြေးဥစ္စာပေးကမ်းတာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေကို ဝေမျှသင်ကြားပေးတာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ် လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ အရာအားလုံးကို စွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားပြီး အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို မွေးမြူတတ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Credit – အနာဂတ်အလင်းတန်းများ
တိုက္ဆုိင္မွဳရွိခဲ႔လွ်င္…. တစ္ခါတေလမွာ… ကိုယ္႔ရဲ႕အေလးနက္စကားတစ္ခြန္းကို မထီျမဲ႕ျမင္ျပဳခံခဲ႔ရတာေတြရွိမယ္ တစ္ခါတေလမွာ.. ကိုယ္႔ရဲ႕စကားတစ္ခြန္းမဆံုးခင္ နားမေထာင္ဘဲ တစ္ဖက္ကိုအာရံုစုိက္သြားတာမ်ိဳး တစ္ခါတေလမွာ.. ကိုယ္႔ကိုေရွာင္ဖယ္ထားၾကတာမ်ိဳး တစ္ခါတေလမွာ.. ကိုယ္႔ကို ဟန္ေဆာင္ျပီး ပက္သက္ေနၾကတယ္လို႔ ခံစားမိတဲ႔အခါမ်ိဳးမွာေပါ႔…. ဒီလိုမ်ိဳးေလးေတြ မၾကာခဏ ၾကံဳခဲ႔ရတုိင္းလည္း တစ္ခါတေလ အလိုလိုေနရင္း အထီးက်န္မိသလိုလို၊ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ၀မ္းနည္းေနမိသလိုလိုနဲ႔ သိပ္ ခံစားရခက္ပါတယ္။ …
ဓာတ္ဆားမႈန္႔ေရေဖ်ာ္ေသာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္သတိထား (#ဓာတ္ဆားဆိုတာဘာလဲ_ဘာအတြက္သံုးတာလဲ)… *ဓာတ္ဆားမႈန္႕(Oral Rehydration Salts)ဆိုတာ… ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္းနဲ႕အေၾကာင္းအမ်ိဴ းမ်ိဴ းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့ ေရဓာတ္နဲ႕ဓာတ္ဆားမ်ား ေလ်ာ႕နည္းျခင္းအတြက္ေရနဲ႕ေဖ်ာ္ေသာက္တာပါ… ယခုလို အလြန္ပူျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေခြ်းထြက္လို႔ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ေရနဲ႕ဆားဓာတ္ေတြျပန္လည္ျဖည္႔တင္းဖို႕အေကာင္းဆံုးေဆးမႈံ႕ေပါ့… (#ဘယ္လိုဓာတ္ဆားေသာက္ရင္အေကာင္းဆံုးလဲ)… *ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးလုပ္ငန္းစက္ရံုကထုတ္လုပ္တဲ့ဓာတ္ဆား… ႏိုင္ငံတကာမွတင္သြင္းေရာင္းခ်တဲ့ဓာတ္ဆားမ်ိဴ းစံု… အျပင္ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရိုးရိုးဓာတ္ဆားမ်ား/သစ္သီးစံုဓာတ္ဆားမ်ား…အမ်ားအျပားေရာင္းခ်ေနၿပီး တမ်ိဴ းနဲ႕တမ်ိဴးအာနိသင္သိသာစြာကြာျခားျခင္းမရွိပဲ…အားလံုးေကာင္းၾကပါတယ္… …
ငါ..ဘြဲ႔မရခဲ့လို႔ ဆိုၿပီး စိတ္အားငယ္စရာ မလိုပါဘူး(ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္ယူျဖစ္ေအာင္ယူသြားပါ) ေတာရြာေလး တစ္ရြာကေနအလြန္ရိုးသားတဲ႕ လူငယ္ေလးဟာ အလုပ္ရွာဖို့ျမိဳ႕ကို တက္လာခဲ႕တယ္ ရွာရင္းရွာရင္းနဲ႕ကုမဏီ တစ္ခုေရွ႔မွာ လူစုလူေဝးျကီးရွိေနတာေျကာင့္ ေမးမိလိုက္တယ္ အကိုတို့ ဒါဘာလုပ္ေနတာလဲဗ် ? “ေအးးးညီ အလုပ္ေရွာက္ေနျကတာကြ ” ”မဟူရာ ကုမဏီေလကြာဝန္ထမ္းအသစ္ေခၚေနတာ” “ဟာဟုတ္လားးး ညီလဲအလုပ္ရွာဖို့ ေတာကတက္လာတာ …